आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना जितेका डा. ज्ञवालीको यस्तो छ अनुभव
२०७७ आश्विन २३ शुक्रबार
काठमाडौं - शुक्रबार बेलुका अलि अलि टाउको दुखे जस्तो भयो । शनिबार विहान रुघा पनि लागेको जस्तो भएको थियो । घाँटी झन् खसखस गर्यो । दिउँसो ज्वरो आउन थाल्यो । ज्वरो अघिपछि रुघा लागेको समयमा आउने भन्दा कडा खालको थियो ।
संक्रमण देखिएपछिको अवस्था अलि फरक हुने रहेछ । यसले मानिसको मनमा कसरी डर जमाएर बसेको छ भन्ने अनुभव पनि भयो ।छिमेकीहरु हामी छतमा गयो भने पनि छतबाट सर्ला झै गरेर डराउनुभयो । त्यसैले हामीमध्ये कोही छतमा जानुपरेमा पनि मास्क लगाएर जाने गथ्यौं । कसैले फोनमा पनि सर्छ कि झैं गरेर कुरा गरेको अनुभव हुँदा भने डरले निकै जरा गाडेको छ भन्ने लाग्यो ।
(यो स्टोरी उनको फेसबुकबाट लिइएको हो । डा. ज्ञवाली नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका अध्यक्ष हुन् । )